JESUS DID IT! (Igbo Translation)
Jizọs mere IT!
Gịnị KWA Onye kwesịrị ịma
S O IHE Ndi enye MEE ? Chineke Holy Bible mesiri anyị obi ike nke IHE Jesus Christ mere , na ihe mere.
The Bible (Chinekenaanịịtụkwasị obi Okwu maka agbụrụ mmadụ) na-agwa anyị:All nke anyị na-mụrụ a mmehie uwa. Anyị ketara ya siAdam na Iv - mbụ na nke abụọ kere ndị mmadụ - n'ihi nnupụisi ha (mmehie) Chineke. Jesus Christ-akwụ ụgwọ maka onye ọ bụla ime mmụọ mgbaghara abịa Ụbọchị Ikpe site na-ewere ha ntaramahụhụ site na-anwụ anwụ ọnwụ n'elu obe - na pụtara naununtaramahụhụ.
Nke ahụ dị mma! Jesus Christ mere ya! Jizọs kwụrụ ihe mgbapụta ugwo maka ebighị ebi gị MM Mgbaghara mmehie - unu FREE ịgbaghara ebighị ime mmụọ ọnwụ bịa ụbọchị-ikp' .
Kere ịbụ na a n'ụlọikpe, na Onyeikpe ka ikpe gị ọnwụ maka mpụ ị mere. Ọzọkwa were Jesus Christ ịbụ gị ọk'iwu. Jesus Christ-ekwu ka na Onyeikpe (ma ọ bụ ndị ọzọ okwu, Chineke Nna ya nke eluigwe): "Gị Honor, m chọrọ ijere ozi m ahịa mara ihe na-akwụ ụgwọ maka ya / ya na-ezighị ezi-na-eme site na-anwụ anwụ kama ka m inweta ike na-aga free si mpụ ọ / ọ mere. "ị pụrụ ichetụ onye na-eme ihe dị ot' ahụ n'ihi na ị ?! Jizọs mere IT!
N'ezie ị nwere ike sị onwe gị kwa na oge: m mere ihe ọ bụla na-ikpe na-anwụ anwụ! M na-na-boro ebubo ụgha! "Gịnị ka m weere na-eme, Chineke ?!" a bụ azịza gị: Chineke nyere 10 nyere n'iwu ka ndị mmadụ na-na Old Testament Bible. Onye ọ bụla nke na-agbaji nnọọ otu n'ime iwu ndị ahụ ga-ata ya ahụhụ n'ihi imebi ha megide Chineke. Ebee ka ọ na-ekwu na ?! Ọ na-ekwu na ndị Rom 6:23: N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ [ Ebighị Ebi na-ata ahụhụ n'ihi na otu onye mmehie], ma onyinye-amara nke Chineke bụ ndụ ebighi ebi n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. ' nwetụla mgbe ị ghaa ụgha? Ghara Ụgha nanị otu oge? Onye ọ bụla n'ime anyị ka ụgha dịkarịa ala otu ugboro. Number nke 9 nke 10 nyere n'iwu, sị: I gaghi-edina (akaebe ụgha). Ị maara ihe na-eme ka anyị? A na-enupụ isi na-emehie ụgha megide omume nke Chineke iwu - Ya 10 nyere n'iwu. ( Mkpughe 21: 8 na-agwa anyị ihe Chineke na-eche na ụgha). Ị dị na-agụ n'elu ihe Chineke kwuru banyere anyị na-enupụ isi na-emehie megide Ya site n'imebi nnọọ ONE nke iwu omume ọma ya: The ụgwọ-ọrụ nke ime ot' ahụ bụ ọnwụ. Obi - ime mmụọ ọnwụ. Total ikewapụ anyị na Chineke na dịghị-ata ahụhụ n'ihi mmehie anyị ruo mgbe ebighị ebi - kpam kpam adabaghi nke ọ bụla ịhụnanya, udo, olileanya, ọṅụ ma ọ bụ mgbaghara mmehie site na Chineke mgbe ọzọ (ma mara dị ka hell). Ma ebe a bụ CHINEKE Thunder NEWS! Anyị nwere ike na-enweta mgbaghara maka ihe niile anyị nupụ isi (mmehie) megide Chineke Nna na anyị mmehie anyị megide ndị ọzọ ugbu a na-enwe n'ezie ugbu a na na Ụbọchị Ikpe, mmehie anyị agaghị enwe buso anyị agha! Ọzọkwa, anyị aha ga-dere na umu-aturu Book of Life (Lee: Mkpughe 20:15 ). Olee ihe mere ya ?! Site na-arịọ Jesus Christ-agbaghara anyị mmehie anyị na-atụkwasị obi na o nwere gbaghara anyị nke ha nanị site anyị ajụ na-atụkwasị ya obi! Jesus ga-eme ya! 1 Jọn 1: 8-9 kwuru, sị: Ọ bụrụ na anyị na-ekwu na anyị na-enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghị kwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, Ọ bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi na dị nnọọ ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. N'ihi ya ma ọ bụrụ na anyị na-eme Jesus anyị onwe anyị na Jehova na Onye Nzọpụta ... oge ọ bụla anyị mere mmehie - na anyị nwere ikike ịjụ Jesus Christ-agbaghara anyị mmehie anyị (s) - ka anyị dị ọcha ka ọ bụ ezie na anyị emehieghị - ya mere na mgbe obi anyị na-akwụsị na-eti, anyị pụrụ inwe obi ike na anyị agaghị na-ata ahụhụ ntaramahụhụ ebighị ebi maka mmehie anyị. Jizọs Kraịst mere ihe ọ bụla ọzọ mmadụ hụtụrụla mere ma ọ bụ mgbe ike na-eme. Ọ bụ nanị onye na mbara ala a bụ onye emehieghị . Ma n'ihi na Ọ dịghị mgbe mehiere, Ọ bụ naanị 'j' dị mma Chineke Nna ga-anabata na-akwụ ụgwọ mgbapụta ugwo maka nke ọ bụla n'ime mmehie anyị. Nke ahụ bụ nanị ịtụnanya, ọ bụghị ya ?! Ma Jizọs mere IT! N'IHI gịnị? N'ihi na nke Ya ỊHỤNANYA furu efu mmehie. Ọ dịghị onye n'ime anyị maara mgbe obi anyị ga-akwụsị eti eti, ime anyị? Ike nke ukwuu ume na-eme udo na Chineke bụ Nna site n'aka Jizọs Kraịst ugbu a . Ekpe ekpere ma na-agwa Jesus ị na-emere gị mmehie megide Chineke. Gwa ya ka ịzọpụta gị site na mmehie gị. Daily na-etinye Ya MBỤ na ihe niile ị na-eche, ikwu na ime. Ka anya dị ka o kwere omume, na-mmiri baptizim , na-arịọ na-atụkwasị obi Jesus na jupụta ị na Mmụọ Nsọ (na-akụziri gị ot' Mụrụ jupụtara kwa ụbọchị! ) Ot' ị nwere ike nyere ya Mmụọ Nsọ na-enwe na-agụ New Testament Bible (Chineke ọhụrụ ọgbụgba ndụ Okwu agbụrụ mmadụ), ma na-erubere iwu Chineke dere maka eso ụzọ Jizọs Kraịst na-erube isi (Ọ dị mma ka ị na - na ị ga-utịp n'ihi na ime ot'!). Jikọọ na ndị Kraịst ndị ọzọ kwere ekwe bụ ndị nwere ike inyere aza ọtụtụ ajụjụ eleghị anya ị nwere, na onye ga-ekpe ekpere maka na-agba gị ume. Ịjụ Jizọs Kraịst ịbụ Onyenzọpụta nke onwe gị, na-eme Ya Onyenwe nke ndụ gị bụ mkpebi amamihe kasị dịrị unu ga-eme. Ọ ga-eme ka ị na- ebighi-enye ọṅụ ụgwọ ọrụ ... na Chineke ga-abụ nnọọ obi ụtọ na i nwere
BỤGHỊ egbughị ebighi-ebi na nzube Chineke zubere maka gị! Ọ dịghị mgbe Chineke kere ka ị na-a egbughị e kere eke nke ya - ichefu na - ma ọ bụ na unu ka Ya na-arụ ọrụ n' ndụ gị - kwa ụbọchị. Ọ ga-bụghị ịmanye gị. Ọ ga- mgbe niile a kpọrọ 'k'. (Mmekọrịta chiri anya nke na-agaghị ẹkama ruo mgbe ebighị ebi na onye ọzọ na-enweghị mgbalị ma ọ bụkwanụ ot' ha na Chineke. Ọ na-achọ ifịk na-achụ ihe ndị kasị pụrụ iche na ndụ gị. Chineke chọrọ ka unu n'ọrụ na-achụ nke Ya karịa ihe ọ bụla ọzọ na ndụ gị . Ọ chọrọ mbụ ebe - bụghị abụọ. Ma gị ot' ... NO ONE ya bụ achọsi ike karịa unu ! Ọ ok' mmasị na-achọ ka ị na-abịa na mmezu , hụrụ n'anya. O nwere n'ezie. nke a ndụ bụ gị amalite na gị n'anya onye Okike ga-adịgide adịgide maka mgbe ebighị ebi .)
[Biko ekpere rue a na onye nwere ike ọ gaghị nụrụ ihe Jizọs mere maka ha site n'ọnụ ọnwụ n'elu obe. Ka ibugharịa a ka onye na Bekee ma ọ bụ asụsụ ọzọ, ime ihe Internet Search dee: Jizọs mere IT nsụgharị Index ]
L' idetuo na mado " Jizọs mere IT! " BAARA ndibuana Oziọma
(Ị nwere ike mado "Jizọs mere IT!" Jidesie gị Facebook page - email mbinye aka - website - blog - video; wdg)
L' KA akwụkwọ mbipụta nke "Jizọs mere IT!" Na-eme ka ha dị ka ndị ọzọ na-anụbeghịkwa a dị oke egwu EZIOKWU - ịtụkwasị Jehova na-enye gị Creative ụzọ na-ha n'aka ndị ọzọ na-adịghị-AHỤ nụrụ IHE ozi ọma.
(Ime mbipụta kesaa: A bụ a . Pdf file )
N'ihi na onye ọ bụla na-enweghị ihe ndị e ji bipụta akwụkwọ na-ekwuchite mere kesaa, anyị ga-ezitere gị otu akwụkwọ a Jizọs mere IT! page-ezigara gị na asụsụ gị oke. Nanị kpaliri anyị arịọ a oyiri na ka anyị mara asụsụ ị ga-achọ ya na (Jiri Google Language Translator dị na n'elu aka ekpe nke na peeji a gwa anyị ihe anyị LANGUAGE na ị chọrọ gị oyiri na-na.) Jide n'aka na-enye anyị a adreesị nzipu ozi na-ezite ya na.
N'ihi na onye ọ bụla bi na continental US ga-achọ 50 FREE mbipụta nke Jizọs mere IT! na-mere dị ka ndị ọzọ, nanị kpaliri anyị arịọ ha na-enye anyị gị adreesị nzipu ozi.
Anyị email: ptoffice@precious-testimonies.com
Dị ka a na-Page? Ezite ya a Friend!